Xiddiga diirada u saaran Chelsea iyo Tottenham Hotspur Pau Torres oo ka hadlay ku biirista tartanka Premier League | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Xiddiga diirada u saaran Chelsea iyo Tottenham Hotspur Pau Torres oo ka...
Xiddiga diirada u saaran Chelsea iyo Tottenham Hotspur Pau Torres oo ka hadlay ku biirista tartanka Premier League
Daafaca dhexe ee Villarreal Pau Torres ayaa shaaca ka qaaday inuu iska diiday fursad uu ugu dhaqaaqi lahaa Premier League maadaama uu doonayay inuu ugu yaraan hal xilli ciyaareed la qaato kooxdiisa haatan.
Ciyaaryahankan 24 jirka ah ayaa bandhigiisii ​​intii lagu jiray ololihii 2020-21 waxaa la rumeysan yahay inuu soo jiitay indhaha kooxaha Manchester United iyo Tottenham Hotspur .
Warbixin dhawaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in Spurs ay Villarreal kala heshiisay xiddiga heerka caalami ee dalka Spain, laakiin Torres ayaa diiday fursad uu ugu wareegi lahaa Tottenham Hotspur Stadium.
Dhanka kale, Chelsea ayaa la rumeysan yahay inay xiiseyneyso daafaca dhexe, kaasoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay gurigiisa.
“Ugu dambayntii, waxaan aad u xiisaynayey inaan ka ciyaaro Champions League aniga iyo kooxdayda maxalliga ah. Sannad marka ay xulka qaranka haystaan ​​caqabado muhiim ah, marka aad isbeddel samayso, ma garanaysid sida ay wax u dhici doonaan,” ayuu Torres u sheegay wariyaasha.
“Waxaa ii caddaatay inay ahayd sannad aan ku raaxeysto Champions League Villarreal,, waa markii afaraad oo Villarreal ay ka ciyaarto Champions League, taasina waa waxa aan aadka u sugayay.
Villarreal waxay ii sheegeen inay ixtiraami doonaan wax kasta oo aan go’aansado, aad ayaan ugu faraxsanahay halkan, waxaan haystaa qandaraas ilaa 2024 ah iyo wax kasta oo qof walba u roon, waan arki doonaa”.
Torres ayaa qeyb ka ahaa kooxda Villarreal oo guuldarro 2-1 ah kala kulantay Man United Champions League.
Previous articleOle Gunnar Solskjaer oo doortay labada xiddig ee Man Utd si gaar ah loogu ammaano guushii Villarreal
Next articleChelsea iyo Liverpool oo xiiseynaya xiddiga kooxda Newcastle United Allan Saint-Maximin
Hague (Caasimada Online) – Xaakimka Soomaaliga ah ee ku jira Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda Cabdulqawi Axmed Yuusuf ayaa ka horyimid go’aanka ay Maxkamadda...